१. सपनामा औंठी लगाएको देख्नु भो भने धन प्राप्त हुन्छ ।२. सपनामा घर बनाएको देख्दा पनि धन हात लाग्छ ।३. कमलको फूल देखेमा पनि धन प्राप्तीको संकेत मानिन्छ ।४. तरभुजा देख्नु भो भने बुझ्नुस् धनलाभ हुँदैछ ।५. सपनामा लाश देख्नु पनि शुभ मानिन्छ । सपनामा लाश देख्दा पैसा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।६. सपनामा गरिवी विपन्नता देखिनु शुभ हो । यसले विपनामा समृद्धी दिलाउँछ ।७. सपनामा सुगाको तोता देख्नु निक्कै शुभ मानिन्छ । यसले धनप्राप्तिको संकेत गर्छ ।८. सपनामा गाइ वा भैसीको थुन छोएको देखे निक्कै राम्रो मानिन्छ ।९. सपनामा तराजु देखियो भने विपनामा धन मिल्छ ।१०. तास खेलेको सपना देख्दा ब्यापार वृद्धी हुने र धन बढ्ने संकेत मिल्छ ।